မျက်စိကွယ်နေတဲ့ဇနီးသည်ကို ပန်းရနံ့ရှုရှိုက်နိုင်ဖို့ ပန်းခင်းကြီး စိုက်ပျိုးပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား…. - Grand Parents-Day
Home / News / မျက်စိကွယ်နေတဲ့ဇနီးသည်ကို ပန်းရနံ့ရှုရှိုက်နိုင်ဖို့ ပန်းခင်းကြီး စိုက်ပျိုးပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား….
မျက်စိကွယ်နေတဲ့ဇနီးသည်ကို ပန်းရနံ့ရှုရှိုက်နိုင်ဖို့ ပန်းခင်းကြီး စိုက်ပျိုးပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား….
by Admins on December 02, 2019 in News
ဇနီးဖြစ်သူက အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါ ခင်ပွန်းသည်လယ်သမားကြီးက အိမ်နီးနားတစ်ဝိုက်မှာ ရနံ့မွှေးကြိုင်နေတဲ့ ပန်းခင်းကြီးကို စိုက်ပျိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူက ဝမ်းနည်းမှုတွေ နည်းပါးပြီး ပျော်ရွှင်ခဲ့ရ ပါတယ် …။
Toshiyuki နဲ့ Yasuko Kuroki တို့ လက်ထပ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်ကြာခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့မှာ နို့စားနွားအကောင် 60 ရှိပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီးနှစ်ပေါင်း 30 အကြာမှာ Yasuko က ဆီးချိုရောဂါနဲ့ မျက်စိကွယ်ခဲ့ ပါတယ်။ မျက်စိကွယ်သွားတဲ့အခါ Yasuko က လူတွေနဲ့ ကြာကြာ စကားမပြောတော့ဘဲ အိမ်ထဲမှာ တံခါးပိတ်ပြီး နေခဲ့ပါတယ် …။
တနေ့မှာတော Toshiyukiက လယ်ထဲမှာ Shibazakura ဆိုတဲ့ တောက်ပပြီး ရနံ့မွှေးတဲ့ ပန်းလေးပေါက်နေတာကို တွေ့သွားပါတယ်၊ Yasuko က ပန်းတွေကို မမြင်ရမှန်း Toshiyuki သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပန်းရဲ့မွှေးရနံ့လေးတွေနဲ့ ဇနီးသည်ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးဖို့ စိတ်ကူး ရသွားပါတယ် …။Toahiyuki က အိမ်အနီးနားမှာ Shinazakura ပန်းတွေကို စတင်စိုက်ပျိုးပါတယ်။ နို့စားနွားခြံကို ကြီးမားတဲ့ ပန်းခင်းကြီးအသွင် ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ခရီးသွားတွေက ချယ်ရီပန်းတွေ ပွင့်တဲ့ရာသီမှာ Toshiyuki ရဲ့ ပန်းခင်းကြီးဆီကို လာရောက် လည်ပတ်ကြပါတယ် …။
အခုဆိုရင် Yasuko လည်း မျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါပြီ။ ပန်းရနံ့တွေက Yasuko ကို အိမ်အပြင်ထွက်လာအောင် ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေ လာလည်တဲ့အခါ Yasuko လည်း အထီးကျန်ဘဝက လွတ်မြောက်ခဲ့ ပါတယ်။ပန်းတွေက Toshiyuki နဲ့ Yasuko ရဲ့ခြံထဲမှာ ပွင့်နေဆဲပါပဲ။ နို့စားနွားခြံကတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ နွားထားတဲ့ရုံကို အခုအခါမှာ ပန်းပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲ လိုက်ပါတယ် …။မတ်လနဲ့ ဧပြီလတိုင်းမှာ Shibazakura ပန်း ပွင့်ပါတယ်။ ခရီးသွားပေါင်း 7000 က ပန်းခင်းဆီကို လာရောက် လည်ပတ်ပြီး ပန်းရနံ့ကို ခံစားကြပါတယ်။ အသက် 70 အရွယ် Yasuko နဲ့ အသက် 80 အရွယ် Toshiyuki တို့ဟာ အချစ်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပန်းခင်းကြီးထဲမှာ ပန်းတွေကိုကြည့်ရင်း လမ်းလျှောက် နေကြဆဲပါပဲ …။ ။